Sulu Sea Honeymoon Suite + Infinity View - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAlfred Lee
UAlfred Lee yi-Superhost
Ngaba uhlala e-El Nido? Intle kakhulu! Sivunyelwe nguSodolophu wase-El Nido u-Edna Lim ukufumana iindwendwe kwicala elikude lesithili sase-El Nido.
Eyona suite intle e-El Nido enombono we-epic wolwandle ilungele iindwendwe ezi-2.
+ Isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa
+ I-El Nido yokuThatha kunye nokuLahla
+ Isixhobo seSnorkeling kunye neKayak Rental
+ Inkonzo yamagumbi
+ Ikofu, iti kunye neeSnacks
+ 1h Ukuphululwa koLwandle
+ Kingsize ibhedi
+ Igumbi lokuhlambela eline-en suite
+ Amawa engxondorha yoLwandle lwaseSulu
Eyona nto ingcono kubathandi behoneymooners kunye nabathandi! <3
Kwicala elikude lesi siqithi kukho indlu encinci encotsheni yengxondorha. Akukho mntu ukufutshane, nguwe kuphela. Iindlela ezijikajikayo ukusuka elunxwemeni olungaphambili (ukusetyenziswa simahla) kukhokelela kwindlu eweni.
ISiqithi sikaMzalwana, esikwabizwa ngokuba yiDarocoton encinci, sisiqithi esikwiPhondo lase-El Nido ePalawan, kwiiPhilippines. Ibekwe malunga ne-400km kumazantsi-ntshona ukusuka eManila kwaye inokufikelelwa ngesikhululo seenqwelomoya i-El Nido.
I-El Nido, ikwiphondo lasePalawan kwaye iphathwa njengenye yezona ndawo zingonakaliswanga kwiiPhilippines. Iziqithi, ihlathi kunye nolwandle njengoko uyazi kwiimuvi kunye neentengiso.
Iphondo le-El Nido laziwa njengomnye wemida yokugqibela eyaziwayo kuphuhliso olubonakala lungenakuthintelwa kukhenketho lorhwebo kuyo yonke indawo.
Kwiziqithi eziselumelwaneni, kukho iidolophu ezincinane needolophana. Ilali ekufutshane yiLigad kwaye inokufikelelwa ngesikhephe ngemizuzu eli-10. Kulapho iprojekthi yokulinga yesisa ye-SAMA-SAMA yaqala khona ngokwakha itanki yokuqala yamanzi ezinzileyo kwingingqi, apho ezisi-8 ngaphezulu zenziwe kule minyaka mi-2 idlulileyo.
Ke kukho iTeneguiban, ilali enkulu elandelayo, malunga nemizuzu engama-25 ukusuka esiqithini. Apho ungafumana i-est 80ha Mangrove Forest ekwalungele ukubukela iintaka.
ISiqithi esikhulu saseDaracoton kunye neSiqithi saseCabuli zezona ndawo zifanelekileyo zokukhenketha esiqithini, zombini nje yimizuzu engama-20.
ISiqithi soMzalwana esiNcinci, esibizwa ngokuba yiNalbot, sinokubonwa kumbono omangalisayo ukusuka kwi-Hilltop Banyan House yethu, apho eyona ankile enkulu emhlabeni yaziwa ngokuba yatshona, kumgama nje wemizuzu emi-5 ukuya kweli-10. Kwakhona kukho ulwandle oluncinci oluziimitha ezili-12 ububanzi apho unokuya kwi-snorkeling kwaye ube nepicknick emini.
Ukuba uhamba uhambo, kukwakho iindlela ezinomdla ukusuka kwilali yaseLigad ukuya kwilali yaseDjapila okanye eTeneguiban. Ukunyuka ukuya e-Djapila kuthatha malunga neeyure ze-2-3 ukubuya nangaphezulu, kunye nokunyuka ukuya eTeneguiban, malunga neeyure ze-4-5.
Vis a vis kwisiqithi esikhulu sasePalawan kunye nakwiziqithi ezijikelezileyo sinokufumana iidolophana ezincinci ezifana neLigad, iTeneguiban neSan Fernando. Ezi ndawo zinokufikelelwa kwimizuzu emi-5 ukuya kwengama-30 ukusuka esiqithini, zilungele uhambo lwemini kunye neepicknicks. Iihambo zasemini zihlala iiyure ezi-6 kwaye zibiza i-P700/umntu. Uhambo lwasemini lubandakanya isidlo sepicknick.
Umbuki zindwendwe ngu- Alfred Lee
Iilwimi: English, Deutsch, Español, Tagalog